လူသိနည်းတဲ့ Run Box Command လေးများ ~ မျိုးကို
လူသိနည်းတဲ့ Run Box Command လေးများ
22:04 Run Command, Technique No comments
1. Run ( . ) (အစက်ကလေး တစ်စက်) ရေးပြီး Enter နှိပ်ပါ။ သူက Home Directory ဆီကို ရောက်ပါတယ်။
2. Run ( .. ) (အစက်ကလေး နှစ်စက်) ရေးပြီး Enter နှိပ်ပါ။ သူက User Directory ဆီကို ရောက်ပါတယ်။
3. Run ( \_ ) (မျဉ်းစောင်းလေး) ရေးပြီး Enter နှိပ်ပါ။ သူက System Drive ဆီကို ရောက်ပါတယ်။